downloads 5 964
version FSX pịa ebe a
Ọzọ a super ịtụnanya na-agbalị na-enweghị imeru ihe n'ókè, ebe a na-a arụzi! ebe a bụ oké nkà, ebe a bụ Tim Conrad.
BMP HD 1024X1024 textures, elu àgwà virtual kokpiiti na clickable, nwa afọ FS2004, gụnyere na SP1 update mkpọ.
-Agụnye na ise repaints na atọ 3D ụdị: "20th TASS, Danang, South Viet Nam 1969", "VMO 2 USMC, Danang, South Viet Nam 1970", "Val-4 USN, Ọfọn Thuy, South Viet Nam 1971", " Morocco Air Force 1980 si "," 40 skwodron, Barcelona, ​​Venezuelan Air Force 1973 ".
The OV-10 Bronco ugbo elu na ground agha, nyoputa onyeiro na ogbunigwe ndu mepụtara site na North American ike. Ọ abuana n'etiti ndị ọzọ na Vietnam Agha na-alụso ọgwụ ọjọọ na Colombia, ebe ọ ka na ọrụ.